Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.3.2 Cabbiraad
Cabbiraadu waxay ku saabsan tahay waxa ku saabsan waxa ay jawaab-celiyeyaashu ka fekerayaan oo ay sameeyaan waxa ay sheegaan.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka matalaadda, wadarta guud ee khaladaadka sahan ee sahanka ayaa muujinaya in ilka labaad ee ugu weyn ee qaladaadka ay tahay cabir : sida aan u sameyno kala duwanaansho jawaabaha jawaabeyaashu siinayaan su'aalahayaga. Waxaa soo baxday in jawaabaha aan heleyno, sidaas darteed odhaahyada aan sameyno, waxay ku xirnaan karaan caqligal ahaan-iyo mararka qaarkood qaabab la yaab leh-sida dhabta ah ee aan u weydiino. Waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka sheegin qodobkan muhiimka ah ee ka fiican kaftan ee buugga cajiibka ah Su'aalaha Weydiisashada ee Norman Bradburn, Seymour Sudman, iyo Brian Wansink (2004) :
Laba wadaaddadii, Dominican iyo Jesuit ah, waxaa la hadlayaan haddii ay tahay dembi ah in sigaar iyo baryayaaye waqti isku mid ah. Ka dib markii ay ku guuldareysteen inay go'aan looga gaaro, mid kasta off aado tasho uu kala sarreeya. Dominican ayaa sheegay, "Muxuu aad tidhaahdaan xoogbadan?"
Jesuit ayaa ka jawaabey, "Waxa uu sheegay in ay ahayd hagaagi."
"Taasi waa funny" Dominican jawaabay, "My horjoogaha ayaa sheegay in ay dembi ah."
Jesuit ayaa sheegay, "Maxaad weyddiiyaan?" Dominican ayaa ku jawaabay, "Waxaan weydiiyay hadii ay ahayd hagaagi sigaar isagoo tukanaya." "Oh" ayuu yiri Jesuit ah, "Waxaan weydiiyay hadii ay ahayd OK si loo tukado, halka sigaarka."
Marka laga reebo kaftan gaar ah, cilmi-baarayaasha ayaa dukumiintiyo siyaabo badan oo nidaamsan oo ah waxa aad baraneyso waxay ku xiran tahay sida aad u weydiiso. Dhab ahaantii, arrinta ugu muhiimsan ee asalka ah ee kaftanka waxay leedahay magac ka mid ah cilmi baarista sahanka: qaabka su'aasha su'aalaha (Kalton and Schuman 1982) . Si aad u aragto sida su'aasha su'aalaha saameyn ugu yeelan karto saamaynta dhabta ah, tixgeli labada su'aalood ee sahan oo isku mid ah:
"Intee in leeg ayaad raacsan tahay bayaankan soo socda: Dadka u badan yihiin in ay eedayn badan xaaladaha bulshada ee dambi iyo sharci ee dalkaan."
"Intee in leeg ayaad raacsan tahay la hadal soo socda: xaaladaha Social badan yihiin in ay eedayn badan shaqsiyaadka dembi iyo dembi ee dalkaan."
Inkasta oo labada su'aaloodba ay u muuqdaan in ay cabbirayaan isla isku mid, waxay soo saareen natiijooyin kala duwan si tijaabo ah oo sahlan (Schuman and Presser 1996) . Markii la weydiisto hal dhinac, qiyaastii 60% ka mid ah jawaab bixiyeyaashu waxay sheegeen in shakhsiyaadka ay ku eedeeyeen dambiga, laakiin markii la waydiiyay qaabka kale, 60% waxay sheegeen in xaaladaha bulshadu ay badanaa la eedaynayo (tirada 3.3). Si kale haddii loo dhigo, faraq yar oo ka dhexeeya labadan su'aalood waxay u horseedi karaan cilmi baarayaasha inay soo afjaraan.
Jaantus 3.3: Natiijooyinka laga helay tijaabada sahan ee muujinaya in cilmi-baarayaashu ay heli karaan jawaabo kala duwan iyadoo ku xiran hadba sida ay u waydiinayaan su'aasha. Inta badan jawaabeyaasha ayaa isku raacay in shakhsiyaadka ay ka badan yihiin eedeyntooda marka loo eego xaaladaha bulsho ee dembiyada iyo sharci la'aanta. Iyo inta badan jawaab bixiyayaasha ayaa isku raacay in ay ka soo horjeedaan: xaaladaha bulsho ayaa ka mas'uul ah shaqsiyaadka. Waxaa laga soo qaatay Schuman and Presser (1996) , miiska 8.1.
Marka laga reebo qaab-dhismeedka su'aasha, jawaab-celiyeyaashu waxay sidoo kale ku siin karaan jawaabo kala duwan, iyadoo ku xiran ereyada gaarka ah ee loo isticmaalo. Tusaale ahaan, si loo cabbiro ra'yiga ku saabsan mudnaanta dowladeed, jawaab-celiyeyaasha waxaa loo akhriyay si dhakhso ah:
"Waxaan wajahnay dhibaatooyin badan wadankan, midkoodna kaas oo si sahal ah ama raqiis lagu xallin karin. Waxaan doonayaa inaan magacaabi qaar ka mid ah dhibaatooyinkan, iyo mid kasta waxaan jeclaan lahaa in aad ii sheeg haddii aad u malaynayso in aan ku kicin lacag aad u badan ku dul, lacag aad u yar, ama ku saabsan qadarka saxda ah. "
Kaddib, kala badh dadka la waydiiyay ayaa la waydiiyay "welfare" iyo kala badh ayaa la waydiiyay "gargaarka saboolka." Inkastoo kuwani ay u muuqdaan laba eray oo kala duwan oo isku mid ah, waxay soo saareen natiijooyin aad u kala duwan (jaantuska 3.4); Maraykanku wuxuu sheegay inuu yahay mid aad u taageersan "gargaarka saboolka" marka loo eego "welfare" (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) .
Jaantuska 3.4: Natiijooyinka ka soo baxa tijaabada sahan ee muujinaya in jawaab-celiyeyaashu ay aad u taageersan yihiin "gargaarka dadka saboolka ah" marka loo eego "samafal." Tani waa tusaale ah saameynta ereyga su'aaleed ee jawaabaha ay cilmi-baarayaashu helaan waxay ku xiran yihiin erayada ay isticmaalaan su'aalahooda. Laga soo bilaabo Huber and Paris (2013) , miiska A1.
Maaddaama tusaalooyinkan ku saabsan saamaynta foomka su'aasha iyo saameynta ereyga, jawaabaha ay cilmi-baarayaashu helaan ayaa saameyn ku yeelan kara sida ay u waydiinayaan su'aalahooda. Tusaalooyinkaasi waxay mararka qaarkood u horseedaan cilmi-baarayaasha in ay ka yaabaan habka "saxda ah" si ay u waydiiyaan su'aalaha sahankooda. Inkasta oo aan u malaynayo inay jiraan siyaabo khalad ah oo khalad ah oo su'aasha loo waydiiyo, uma maleynayo inay jirto mar walba hal hab oo sax ah. Taasi waa, si cad uma fiicna in la waydiiyo "welfare" ama "gargaarka saboolka"; kuwani waa laba su'aalood oo kala duwan oo cabbiraya laba waxyaabood oo kala duwan oo ku saabsan dabeecadaha jawaab-celinta. Tusaalooyinkan waxaa kale oo ay mararka qaar u horseedaa cilmi-baarayaasha in ay soo gabagabeeyaan baaritaannada aan loo isticmaalin. Nasiib darro, marmarka qaarkood ma jiro wax doorasho ah. Taa bedelkeeda, waxaan u maleynayaa in casharka saxda ah ee laga soo qaadanayo tusaalooyinkani ay tahay inaanu si taxadar leh u dhisno su'aalahayaga waana inaanan aqbalin jawaabaha si aan macquul ahayn.
Badanaa waa arrin macquul ah, tani macnaheedu waa haddii aad falanqeynayso xogta xog ururinta ee ay ururiyeen qof kale, hubi inaad akhrido su'aalaha saxda ah. Haddii aad sameysey su'aalo adiga kuu gaar ah, waxaan heystaa afar talooyin. Ugu horreyn, waxaan soo jeedinayaa in aad wax dheeraad ah ka akhrisid qaabeynta Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) su'aalaha (sida, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); waxaa jira waxyaabo badan oo tan ka badan intii aan awooday inaan halkan ku sharaxo. Marka labaad, waxaan soo jeedinayaa in aad nuqul-erey-ereyga-erey-su'aaleed ka sameysato sahammo tayo sare leh. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad waydiisatid jawaab bixiyayaasha ku saabsan jinsiyadooda / jinsiyaddooda, waxaad awoodi kartaa inaad koobi karto su'aalaha loo isticmaalo sahanada dawladeed ee ballaaran, sida tirakoobka. Inkastoo tani ay u muuqan karto sida qallal-gelinta, su'aalaha nuqulinta lagu dhiirrigeliyo cilmi-baaris (haddii aad qorto baaritaanka asalka ah). Haddii aad daabacayso su'aalaha sahan heer sare ah, waad hubsan kartaa in la imtixaanay, iyo waxaad isbarbar dhigi kartaa jawaabaha sahankaaga si aad uga jawaabto su'aalaha ka soo baxa baaritaano kale. Seddexaad, haddii aad u maleyneyso in suáalahaaga ku jiri karo saameyn ku saabsan ereyada muhiimka ah ama saamaynta su'aasha su'aalaha, waxaad tijaabin kartaa tijaabada sahanka taas oo kala badh ka mid ah jawaabeyaasha ay helayaan hal qaybood oo su'aasha ah iyo nus ayaa helaya qaybta kale (Krosnick 2011) . Ugu dambeyntii, waxaan soo jeedinayaa in aad tijaabiso-su'aalo aad la socotid dadka qaar ka mid ah dadkaaga; cilmi baarayaasha ayaa ku baaqay habka baaritaanka hore (Presser et al. 2004) . Waayo-aragnimadayda ayaa ah in baaritaanka hore ee baaritaanka uu yahay mid aad u caawin kara.